Chipiri, Mbudzi 14, 2017 Chipiri, Mbudzi 14, 2017 Douglas Karr
LinkedIn inoenderera mberi iri sosi yekutanga yebhizimusi rangu sezvo ini ndinotsvaga tarisiro uye vadyidzani vebhizinesi rangu. Handina chokwadi chekuti zuva haripfuure nekuti handisi kushandisa account yangu yehunyanzvi kuti ndibatanidze nekusangana nevamwe. LinkedIn inoenderera mberi ichiona chinzvimbo chavo chakakosha munzvimbo yemagariro enhau, vachiona kugona kwemabhizinesi ekubatanidza kutora kana kutora. Vatengesi vanoziva kuti mhedzisiro yekutora mhedzisiro yakadzikira zvakanyanya sekutarisira kuri
Une Nyaya YeMuvhuro… nemaAds?
China, November 4, 2010 China, July 25, 2013 Douglas Karr
Iko hakuna mabhizinesi akawandisa andinoshandira kwandinoona hunhu hwakajairika pachikamu chemusika, asi sekufunga kwangu iro rangu rebasa uye mapinduriro andinoita kushambadziro, ndinofanira kubvuma kuti kutsvagurudza kwakaitwa naBizo kunogona kunge kuri pane chimwe chinhu. Bizo yakaburitsa iyi infographic nezuro, inonzi An Advertiser's Weekly Planner inoratidza zuva revashandi vebhizinesi, kazhinji, vangangoita kushambadziro yepamhepo. Bizo akaongorora zvakare shanu dzakasiyana kwazvo